Nzvimbo Yekutarisisa / Midziyo | Ota Ward Horo Aplico
Kuti tive nechokwadi chekuchengetedzwa kwevashandisi vese, tichaita basa rekugadzira masiringi eaprico / horo hombe, horo diki uye hombe horo foyer, uye siringi yeimba yekuratidzira inodzivirira kusagadzikana, uye basa rekugadzirisa kuwedzera hupenyu hwenzvimbo ..
[Yakarongwa nguva yekuvhara: Ndira 2022 kusvika Kukadzi 1 (zvakarongwa)]
Ruzivo ndirwoPanoNdokumbira utarise zvimwe.
Midziyo pepa rehurukuro
Horo hombe iyo inogona kunzi ndiyo huru yeAprico.Zvigaro zve1477 zvakapararira munzvimbo huru yakakomberedzwa nekudziya kwehuni.
Iwe unogona kunzwa kuzvipira kune kurira kwakazara kwese kwese, kusanganisira iyo yekufamba acoustic reflector iyo inopa kurira kwemhere mhere kune zvigaro zvevateereri.
Pamberi pechikuva: Stage keteni "Rwiyo rweShinki" naRyuko Kawabata
Chikamu kubva kune vateereri: Nebhodhi bhodhi riri kunze
Zvigaro zvevateereri zvakawandisa: Kubva padivi redanho
Lighting zvishandiso runyorwa
Audio michina runyorwa
(Inoshandisa proscenium inofambiswa)
Ruoko rwakanaka 10m
Yepazasi ruoko 12m Kufamba acoustic reflector
donha keteni *
Keteni reOpera *
Yechinguva maruva mugwagwa
Yenhambo Noh nhanho
* Haigone kushandiswa kana uchishandisa chiyeuchidzo.
Dimming dunhu 3kw x 344 maseketi echikamu
6kw x 12 macircuit ezvigaro, 3kw x 4 macircuits
Lighting koni (Panasonic Pacolith Pfura) Preset fader 120ch
Manual 3-nhanho zviuru zvechiitiko ndangariro
(Yemahara painoshandiswa sechiedza chebasa, asi ichibhadharwa painoshandiswa sechiedza chemwenje) 3 mitsara
siringi mwenje 2 mitsara
Kuturika mwenje (zambuko mhando) 4 mitsara
Chiedza cheProscenium 2 mitsara
Kuonekwa kwemaziso 1 seti
Kumusoro Horizont Lower Horizont Chiedza 1 mutsara 1 mutsara
Chiedza chetsoka Zvikamu zvisere x 8 mavara
Mberi kweruvara rwekutarisa 60w 12 mwenje / 3 maseketi 14
(Inogona kushandiswa kana uchishandisa octopus)
Center pini yekutaridzika
(Anoshanda anodikanwa kuti aishandise.) 2kw xenon x 4
Nhare yekusanganisa (YAMAHA CL-3) Kuisa: Monaural 64ch
◇ Kubuda: Sanganisa bhazi 24
Stereo bhazi 1ch
waya maikorofoni 800MHz (B frequency bhendi) x 6ch
3-poindi yakaturika maikorofoni chishandiso
Proscenium Mutauri (L / C / R)
Chikamu chekoramu mutauri (L / R)
6 matafura ekugamuchira
12 tafura refu
3 mabhodhi emashoko (A4 saizi, B9 saizi, nezvimwewo)
3 katatu skrini
Mepu yenzvimbo yekugamuchira
tinya pano kudhanilodha
Zvigaro gumi mumutsara wechi14, 2-11, zvakabviswa mawiricheya.
Murongi ndiye ane basa rekuisa pamwe nekudzorera zvigaro. (Zvinotora maminetsi makumi maviri kuti vanhu vana vashande.)
Paunenge uchiisa masipika enguva pfupi, zvimwe zvezvigaro zvevateereri zvinogona kushomeka.
Ndapota chenjera paunenge uchiita chigaro chakachengetwa.
Kugamuchirwa kune hombe hombe vateereri zvigaro zvinonyanya kubva kune yechipiri pasi.Ndokumbira umise yekugamuchira padenga rechipiri.
Iyo magnetic loop (*) yakaiswa muhoro hombe.
Kuti ushandise iyo magnetic loop, iwe unozoda iyo yakanamatira odhiyo michina.
Kana iwe uri murongi uyo anoda kuishandisa, ndapota nyorera pamberi.
* Kunzwa rutsigiro system kunyatsoburitsa izwi padariro kune vatengi
Mari yekushandisa yezvivakwa uye nenjodzi yekushandisa michina
Mazuva evhiki / Mugovera, Svondo, uye mazororo
Mangwanani (9: 00-12: 00)
Masikati (13: 00-17: 00)
Husiku (18: 00-22: 00)
Zuva rese (9: 00-22: 00)
Horo Huru: Chikamu chete
Yakakosha yekutanga yekupfeka imba
1st yekupfeka imba
2st yekupfeka imba
3st yekupfeka imba
4st yekupfeka imba
5st yekupfeka imba
6st yekupfeka imba
Vashandisi vari kunze kwewadi
Ancillary michina yekushandisa mashandisirwo
Zvichiitika michina / michina yekushandisa muripo
Stage / vateereri kudhirowa
Yakakura horo chikuva chirongwa
Pakazara muchinjikwa chikamu cheiyo hombe horo
Hombe hombe vateereri kudhirowa
Nezve imba yekupfekedza, imba yevashandi, nezvimwe.
Kuwedzera kumakamuri masere ekupfekedza akabhadharwa, horo hombe ine kamuri yevashandi, yekupfekedza hofisi, yekuronga yekumirira, yekugezera imba yevatambi, imba yekuvharira, imba yevana yechikoro chekireshi, uye imba yekubatsira yekutanga.
Kuti uwane mamwe mashokoRuzivo pane hombe hofisi yekupfeka Ndokumbira utarise kune iyo.
1st yekupfeka imba (XNUMXst yepasi pasi pasi)
1th yekupfeka imba (yekutanga yepasi pasi)
Hombe hombe MAP
Chikamu / chekupfeka kamuri
1st yepasi pasi